Qarax ka Dhacay Baqdaad oo Dilay 14-Qof – Radio Daljir
Qarax ka Dhacay Baqdaad oo Dilay 14-Qof
Seteembar 17, 2015 5:48 b 0
Khamiis, September 17, 2015 (Daljir) — Ugu yaraan 14 ruux oo ciraaqiyiin ah ayaa kudhimatay intii lagu guda jirey labo weerar oo Ismiidaamin ah oo kadhacay deegaamada ay dadka Shiicada ah u badan yihiin ee kuyaal bartamaha magaalada caasimadda ah ee Baqdaad, sida ay sheegayaan warbaahinta wadankaasi.
Subaxnimadii khamiistii ee lasoo dhaafay ayey ahayd markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay xarunta ganacsiga ee Bab Al-sharqi ee magaalada Baqdaad, kaasi oo ay kudhinteen 9 ruux 40 kalena ay ku dhaawacmeen.
Qaraxa Labaad ayaa dhacay kadib markii walxaha qarxa oo aan lacadayn waxa ay ahaayeen ay ku qarxeen Fagaaraha Al-wathba ee magaalada Baqdaad, waxaana inta la xaqiijiyey kudhintay shan ruux iyadoona ay 29 kale ku dhaawacmeen.
Howlgalka Qaramada Midoobey ee wadanka Ciraaq ayaa dhankooda shaaca ka qaaday in 1,325 ruux oo ciraaqiyiin ah ay kudhinteen, 1,811 kalena ay ku dhaawacmeen falalka argagixisanimo, qalalaasaha iyo Iskahor Imaadyada hubaysan ee Ciraaq bishii Augustus ee sanadkaan kaliya.
Qaxootigii ugu badnaa oo Syrian ah oo Galay Croatia